musha Africa Singers Yemi Alade Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Yemi Alade Biography inoratidza Chokwadi paChidiki Nyaya Yake Yevacheche, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Vanin'ina, Mukomana / Murume kuti ave, Mararamiro uye Hupenyu hwePamoyo.
ChildhoodBiography inounza ongororo izere yeHupenyu Hwake Nhau, kutanga kubva paYake Yekutanga Makore kusvika paakazozivikanwa.
Mufananidzo wekufambira mberi kweYemi Alade's Hupenyu Hupenyu.
Ehe, iwe neni tinoziva kuti ndimumwe wavo ivo vepamusoro gumi veNigerian vakadzi maartist emakore gumi (Iwo 10s).
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga kuverenga Yemi Alade's biography, inova inoyevedza. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Yemi Alade Childhood Nyaya:
Yemi Eberechi Alade akazvarwa musi we13th waMarch 1989 kuna amai vake, Helen Uzoma, uye baba, James Alade kuAbia State Nigeria. Vabereki vaYemi Alade vakamuita iye wechishanu pavana vanomwe vakazvarwa mumubatanidzwa wavo.
Iyo Hupenyu Hupenyu hwaYemi Alade inoratidza kuti agara achifarira mimhanzi yakanaka kubva pamazuva ake eudiki. Chokwadi ndechekuti, semusikana mudiki, aigara achiedza kunyora mimhanzi yake, kunyangwe munguva dzakanaka kana dzakaipa.
Yemi Alade Mhuri Yemhuri:
Kazhinji, vanhu vanowanzo bvunzana nezve yake chaiyo mhuri yemhuri. Chikonzero chiri kumashure kwavo kwekuda kuziva ndechekuti Yemi Alade ane mazita maviri anobva kumadzinza maviri akasiyana muNigeria.
Iye akazvarwa mumhuri yemhuri ine madzinza maviri. Mukupfupisa, vabereki vaYemi Alade ndevemadzinza akasiyana. Amai vake ndevorudzi rweIgbo apo baba vake vari verudzi rweYoruba.
Nekuda kwavo Yemi Alade's Mhuri yekwakabva, akapihwa mazita maviri ane chekuita nerudzi rwababa vake naamai.
Uyezve, zita rake Yemi (anobva kuYoruba) uye Eberechi (kubva kuIgbo) ndicho chikonzero nei achiwanzonzi musikana weYoruba-Igbo. Nekudaro, vazhinji vevateveri vake vakangoziva nezve yake nhaka yeYoruba.
Yemi Alade Nyaya Yehucheche Nyaya- Makore Ekutanga Mberi Mumhanzi:
Muimbi wedu wekare akarererwa mudunhu reLagos padhuze nevanun'una vake. Kukura nemhuri yake, Yemi aigara achiseka sevamwe vana. Naizvozvo, iye anoita nguva yekutamba mitambo yakakurumbira akasiyana nevamwe vana munharaunda yake.
Hupenyu hwaive nyore nyore kuna Yemi Alade basa rake raingova rekuita mamwe mabasa epamba mushure mekuchikoro. Kunyangwe zvakadaro, akanyanya kufarira kuteerera mimhanzi yemakore makumi masere nemapfumbamwe.
Nekudaro, yake yekutanga poindi yekubudirira mimhanzi basa yaive yakavakirwa pane isingazive kutyaira kwemimhanzi mumimhanzi.
Yemi Alade Dzidzo:
Kuzvarwa mumhuri inokoshesa dzidzo, Vabereki vaYemi Alade vakamunyorera kunodzidza kuSt.Saviour British Primary School.
Akadzidza zvakaoma uye akapedza chikoro chepuraimari munguva yakafanira. Pakarepo, akawedzera kudzidza kwake kwechipiri kuVictory Grammer Chikoro.
Aive alumnus weSt.Saviour British Primary Chikoro. Tarisa uone chikoro chake chepuraimari.
Pamazuva ake echikoro chesekondari, muimbi ane tarenda ainyanya kunetseka nezvekuita kwake zvechikoro pane chero chinhu chipi zvacho. Kunyangwe aida mimhanzi, aive akatarisana nekubudirira mukuita kwake kudzidza.
Yemi Alade Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Panguva iyo Yemi akange aine makore gumi nematanhatu, akabatana neboka revasikana vese, Noty Zvinonhuwira. Mushure mechinguva chidiki, akatanga kunetsa mimhanzi yake yekutanga neboka. Nekudaro, mimhanzi iyi haina kuwana mukurumbira sezvaaive akatarisira.
Pasina nguva iri kure, Yemi anosarudza rakasiyana basa nzira uye akatsvaga kupinda kuYunivhesiti.
Akawana rubvumo rwekudzidza Geography kuUniversity yeLagos State, nekudaro akatanga kudzidza. Kufanana Kizz Daniel, kuedza kwake kudzidza hakuna kuraswa sezvo achangopedza kudzidza kubva kuUniversity.
Yemi Alade Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kunyangwe aive apinda mune rakasiyana basa mutsara, Yemi haana kukanda mapfumo pamimhanzi. Munguva pfupi, akatora chikamu uye akahwina Peak Talent Show yakaitirwa muna 2009. Kazhinji, anga ahwina makwikwi nekuda kwetarenda rake remimhanzi.
Nekudaro, akataura nezve maitiro aakadzidziswa panguva yemakwikwi.
Kutanga kwemugwagwa waYemi Alade unoenda mukurumbira paPeak Talent Show 2009.
Nekuda kweizvozvo, Yemi akaenderera mberi nekuratidza tarenda rake mune mamwe mimwe mitambo nezviitiko. Panguva ino kutenderedza, ainyatsogutsikana nezvezvaanoda kuita nehupenyu hwake. Uyezve, akatanga kudzidzira zvisingaperi mune mamwe kugadzira nguva dzakarasika.
Yemi Alade Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Mushure memakore mashoma ekuita padanho, Yemi Alade akasaina chibvumirano chebvumirano neEffyzzie Music Group rekodhi rekodhi mu2012.
Neboka iri, akaburitsa mimhanzi yake yakanzi "Ghen Ghen Love". Shure kwaizvozvo, akaenderera mberi nekugadzira mimwe mizhinji yepfungwa dzichiputika mhando dzemimhanzi.
Ghen Ghen Rudo akavhura iyo portal yekusimukira kwaYemi Alade mukurumbira.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Yemi Alade's biography; musikana weYoruba-Igbo akakwira mukurumbira munyika yekuvaraidza yeNigerian. Muna 2019, akaburitsa yake yechina studio album yakanzi Mukadzi wesimbi.
MuAlbum maive nemukadzi wechikadzi akapfuma wemuYoruba Funke Akindele, akahwina mubairo wegrammy, Angelique Kidjo, uye murwi wemuAmerican Rick Ross.
Uyezve, kungofanana nevaimbi vekuNigerian vane mukurumbira; Davido, Wizkid, uye Burna Boy, Yemi Alade akagamuchira mibairo yakawanda yenyika uye yepasi rose. Chokwadi akakunda. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Yemi Alade Kuda Hupenyu: Mukomana (s), Husband, uye Vana?
Kubva muna Chivabvu 2020, hukama hwehukama hwaYemi Alade hauna kuroora. Kuva muimbi anobudirira, Yemi akavimbisa kuti anochengetedza mwero murudo-hupenyu hwake.
Pazasi pane zvinonakidza chokwadi nezvehukama hwehukama hwaYemi Alade hwausingakwanise kupotsa. Verenga pamusoro;
Ndiani mukomana waJemi Alade?
Unoziva here?… Yemi Alade anga akabatana nevakakurumbira vekuNigerian muhupenyu hwehukama hwake. Kubva paakasimukira kuva nemukurumbira, muimbi wechikadzi muimbi akabvuma kuti aive nerudo nemurapi weNigeria, Phyno.
Uyezve, akataura zvakare kuti aive nefling yemuvaraidzi wemimhanzi weEnugu, Flavor N'abania. Imwe nyaya yekufambidzana inonongedzera Mikel Obi.
Aive nehukama hwaifamba naFlavour (L) uye Phyno (R).
Zvisinei, Yemi Alade akambotaura chete mumwe chete anoziva mukurumbira kubva pakusimuka kwake mukurumbira. Mushure mekugadzirwa kwemimhanzi yake yemimhanzi, "Johnny", Yemi anonzi aifambidzana muchivande mutambi weNigerian, Alex Ekubo.
Chirevo chingave chakabuda semhedzisiro yaAlex achitamba chinzvimbo che "Johnny the over boy" muvhidhiyo yake.
Ivo vaviri vanoita mutambo wakanaka. Zvisinei, Alex Ekubo haasi mukomana waYemi Alade.
Kunyangwe zvakadaro, paakabvunzwa nezvehukama hwake naAlex Ekubo, akapindura kuti aive mukomana akanaka.
Zvakare, akataura kuti nekuda kwehukama hwepedyo naye, vanhu vazhinji vanofunga kuti vari kufambidzana. Mukupfupisa, Alex Ekubo haasi mukomana waYemi Alade.
Mhuri yaYemi Alade (Murume uye Vana):
Muimbi wekuNigeria akasaroora panguva yekunyora nyaya yehupenyu hwake. Akataura kuti angada kuroora munhu waanoda uye waanofarira.
Kunyangwe zvakadaro, vazhinji vevateveri vake vakamirira zuva raanoroora uye kubereka vana vakanaka.
Yemi Alade Hupenyu hwemhuri:
Imwe yeanonyanya kutsvakwa ruzivo rweiye wekuNigeria ane simba muimbi ruzivo pamusoro pemhuri yake yese. Muchikamu chino, tichakuunzira ruzivo rwakakwana pamusoro pevabereki vaYemi Alade uye nevamwe vese veimba yake.
Nezve Amai vaYemi Alade:
Helen Uzoma ndiamai vaYemi Alade. Anobva kuAbia mudunhu rekumabvazuva kweNigeria. Helen tsananguro yaamai vanobudirira.
Kuvimba kwake kwakasimba kumira uye kuziva nekubudirira kwemwanasikana wake kwechipiri kune hakuna. Muchidimbu, amai vaYemi ndivo nhamba yavo yekutanga fan kubva paakasimuka mukurumbira.
Nezve Baba vaYemi Alade:
James Alade ndibaba vaYemi Alade. Aimbove komisheni wemapurisa aiona kuti anotarisira zvinodiwa nevana vake.
Anobva kunzvimbo yeOndo mudunhu rekumabvazuva kweNigeria. Nehurombo, kushungurudzika kwekushungurudzika mhuri yaYemi Alade saJames Alade akarasikirwa nehupenyu hwake kumaoko anotonhora erufu.
Mufananidzo usingawanzoitika wababa vaYemi Alade vakagara padivi pake.
Nezve Yemi Alade's Siblings:
Muimbi weku pop wekuNigeria ane hama ina nehanzvadzi mbiri. Vanun'una vake vanozivikanwa ndiJessica Ejiofor nemunun'una wake, Durojaiye Alade.
Durojaiye akapedza kudzidza neB.Sc muPsychology. Nekudaro, akagamuchirwa semubatsiri wemapurisa superintendent (ASP) weNigerian Police Force.
Nyatso tarisa Mhuri yaYemi Alade panguva yekuvigwa kwababa vavo. Iwe unogona kumuona here mune yake yekumba heti?
Nezve Hama dzaYemi Alade:
Kuenderera mberi kumadzitateguru aYemi Alade, pakange pasina ruzivo rwakakodzera nezve mbuya nasekuru nasekuru vake. Ikoko kwave kusinawo nhau pamusoro pasekuru nasekuru vake. Kupfuurirazve, hapana ruzivo rwuripo nezve babamunini vake nababamunini pamwe nababamunini vake nababamunini.
Yemi Alade Hupenyu hweMunhu:
Wedu mukurumbira wemumhanzi mukurumbira anotungamira hupenyu hwakavanzika. Kutanga neyake horoscope, iye musanganiswa weVirgo zodiac maitiro.
Iye anongova iwo wekupedzisira musanganiswa werunako uye pfungwa. Kunaka kwake chaiko mumafashoni kunosiya vazhinji vevateereri vake vanyura mumafaro ekushamisika.
Kunze kwezvo, muvhimi wepeop muimbi haana kana mhosva, akazivisa zvaari kuita kune vateveri vake. Nekudaro, zvakanyatsojeka kuti akave nekufarira fashoni nekunakisa nzira.
Kuona mufashoni. Haasi akanakisa mupfekero wake wakanaka here?
Yemi Alade Mararamiro:
Mushure mekuburitsa akati wandei maalbum akabudirira, Yemi Alade akange aita zviitiko zvakakura zvemari. Nhasi, amuka kukirasi yemamirionea.
Mambure ake anokosha anofungidzirwa kunge ari mari yekukwereta yemamiriyoni emadhora 4.2. Nekudaro, Yemi ikozvino anorarama hupenyu hwoumbozha.
Yemi Alade atenga mota zhinji pamwe neimba yepamusoro kubva paakakwira mukurumbira. Muna 2019, akazvipa chipo cheToyota Prado SUV inodhura # 48 miriyoni.
Uyezve, Yemi ane yake inodhura G-Wagon iyo yaakange aratidzira pasocial media. Tarisa uone mota dzake pazasi.
Iye ane kuravira kwemota hombe. Kutarisa mumatanho emota yaYemi Alade - G-Wagon (L) uye SUV (R).
Yemi Alade Chokwadi:
Kuputira yedu Yemi Alade nyaya, hezvino zvimwe zvisinganyatso-kuzivikanwa chokwadi izvo zvinokubatsira iwe kuti uzwisise zvizere zvehupenyu hwake.
Chokwadi # 1: Ndiye Mambo weMambokadzi:
Musoro wealbum yaYemi Alade “Mambo waMambokadzi” akasimudza mibvunzo yakawanda kubva kune vateveri vake. Akabvunzwa kuti sei akauya nemusoro wakadai rekodhi. Heino mhinduro yake kumubvunzo;
"Ndanga ndichizvidaidza kuti King Yemi Alade nekuda kwezvikonzero zvinopfuura kuve neropa rebhuruu. Zvakare, iko kujekesa kusheedzera kune vese vakadzi maartist kuti vazive kuti vanofanirwa kubuda pavanenge vari uye kukwikwidza sezvingaite mukomana ".
Chokwadi Chokwadi # 2: Nhamba Dzokuenzanisira:
Yemi Alade's muenzaniso wemuimbi indasitiri ndiWaje naOmawunmi. Maitiro avo emumhanzi akasiya chimiro chisingaperi paari. Nekudaro, akabva azviwana achishambira mudziva remukurumbira mushure mekushanda nesimba kuvapfuura.
Tarisa uone kunaka kwakaita Yemi Alade's yemuenzaniso inotaridzika - Omawunmi (L) uye Waje (R).
Chokwadi # 3: Iye ane Chishongo Yejecha:
Chimwe chinhu chinonakidza pamusoro peYemi Alade ndicho umwene hweYake jewelry. Sezvo kufarira kwake kuYunivhesiti zvaakawedzera, akafunga kugadzira "YemiAlade Unganidzo" sebasa rako pachako.
Kupfuurirazve, akataura zvakare kuti hunhu hwake nehupenyu hwehupenyu hwakafemera muunganidzwa.
Akaratidza kuve muzvinabhizimusi mukuru munguva pfupi yadarika.
Pazasi pane wiki zivobase yemuimbi weNigeria. Iyo tafura ichakubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi;
Zita rizere: Yemi Eberechi Alade
Nick Zita: Mambo waMambokadzi
Akazvarwa: 13, Kubvumbi 1989
Baba: James Alade
Amai: Helen Uzoma
Vanun'una: 4 hama uye 2 hanzvadzi
Net Worth: $ 4.2 Million
Kureba mita: 1.65 m
Kureba mu Tsoka: 5'3 "
Kuvonga nekuverenga iyo Biography yeYemi Alade. Pasina mubvunzo, iye ari pakati pegumi vepamusoro veNigeria vevakadzi vevakadzi vemakore gumi- 10-2010.
Paaive achimisikidza yake Hupenyu Hupenyu, vatariri vedu vaive vakatarisa paicho kurongeka uye kurongeka. Nomutsa tiudze zvaunofunga nezve yedu kunyora pane Musiki Wepamusoro weWakadzi Musiki.